Home / Critical Thinking Vs Creative Thinking
Critical Thinking နဲ့ Creative Thinking ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့အများစု ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားဖူးနေကြမှာပါ။
ဒီတော့ Critical Thinking ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ဘယ်လို အတွေးအခေါ်မျိုးကို Creative Thinking လို့ခေါ်တာလဲ? Critical Thinking နဲ့ Creative Thinking ကဘယ်လို ကွာခြားလဲ ဆိုတော့ Critical Thinking ဆိုတာ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကြုံလာရတိုင်း ဘယ်လို အဖြေက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်တဲ့ Thinking Skill တစ်ခုပါ။ Creative Thinking ဆိုတာကတော့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းချက် အသစ် အသစ်တွေက ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ skill တစ်မျိုးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
Critical Thinking ဆိုတာ ကျိုးကြောင်းစီလျော်စွာ ဝေဖန်ပိုင်းခြား တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းလို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။
Critical Thinking ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်က Idea တွေကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ယုတ္တိကျကျ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ပြဿနာတွေ၊ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှု အပြည့်နဲ့ စနစ်တကျ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတတ်ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှ သတိထားရမှာတစ်ခုက အခြားသူတွေနဲ့ ပြိုင်ပြီး အချေအတင် ငြင်းခုန်ပြောဆိုတတ်တာမျိုးတွေ၊ မလိုအပ်တာတွေမှာ အလေးအနက် တွေးတောနေတာမျိုးတွေကို Critical Thinking ရှိတယ်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။)
ဒါ့အပြင် လူအချို့က Critical Thinking ဆိုတာ ယုတ္တိဆန်ဆန် တွေးခေါ်ရမယ် ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုရှိရမယ် စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာရမယ် စတဲ့ အချက်တွေ ပေါ်မူတည်တယ်လို့ တထစ်ချ ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက် Creativity ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်က Critical Thinking ဆိုတာ Creativity ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖန်တီး တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ အတွေးအမြင်သစ်တွေကို တိုးတက်ပြောင်းလဲ ချိန်ဆတတ်လာအောင် Critical Thinking က တစ်ထောင့်တစ်နေရာက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သတိမထားမိကြလို့သာပါ၊ Critical Thinking ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တစ်စိတ်တစ်နေရာက အမြဲပါဝင်နေပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ဖို့ ဘယ် Shampoo ကို သုံးရမလဲ၊ ဘယ်ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရမလဲ၊ ဘာရုပ်ရှင်ကြည့်ရမလဲ စတဲ့ နေ့စဉ် သာမန်ကိစ္စလေးတွေကစလို့ ရုံးမှာ အိမ်မှာ ကျောင်းမှာ ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်တွေ ထားရှိသင့်လဲ၊ နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာ ဘယ်သူ့ကို မဲထည့်ရမလဲ စတဲ့ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတွေအထိ Critical Thinking ကအရေးပါပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဥပမာအားဖြင့် Social Media ပေါ်မှာ မြင်သမျှ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မယုံကြည်ဘဲ ပညာရှိဆန်ဆန် ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးဟာ Cirtical Thinking Skill ပါပဲ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ Critical Thinking ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် နှိုင်းဆ ချင့်ချိန် ဝေဖန် ပိုင်းခြား ဆုံးဖြတ် နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ... Creative Thinking ဆိုတာကရော ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
Creative Thinking ဆိုတာ ကိစ္စတစ်ခုကို မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုကနေ စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ ဘောင်အပြင်ကနေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Creative Thinking ကြောင့်ပဲ စိန်ခေါ်မှု အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်၊ အများနဲ့မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ရှုထောင့်တွေက တဆင့် ကိစ္စတိုင်းကိုမြင်တတ်လာပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်မျိုးတွေ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်။
ဆိုတော့ အလွယ်ပြောရရင် Creative Thinking ဆိုတာ အမိုက်စားတွေကို တွေးခေါ်တတ်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ အရင်တုန်းက မတွေးမိခဲ့ဖူးတဲ့၊ မစဉ်းစားမိဖူးတဲ့ အတွေးအခေါ်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေ ထုတ်တာမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အများစု ရင်းနှီးကြတဲ့ “Brainstorming” လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း Creative Thinking ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲ။
ဒါ့အပြင် Creative Thinking ဆိုတာမျိုးက “ရုတ်တရက်ဆိုသလို” ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလို၊ အသေအချာ တွေးတောနေရင်းကနေ ပေါ်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တမင်လုပ်ယူ ဖန်တီး တွေးတာရင်း ဖြစ်လာနိုင်သလို လျှပ်တပြက်ပေါ်တတ်လာတတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Idea A ကို ဒီထက်ပို အမိုက်စားဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို ထပ်လုပ်ရမလဲ တွေးနေရင်းက ပိုကောင်းတဲ့ Idea B ပေါ်လာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကော်ဖီသောက်နေရင်းက Idea C က ပေါ်လာတာမျိုးတွေပေါ့။
Creative Thinking ရှိသူအများစုက Communication ကောင်းကြတယ်၊ Flexible ဖြစ်တယ်၊ Open-Minded ဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတကြွယ်ဝကြတယ်။ အခြားလူတွေနဲ့ မတူညီတဲ့အချက်က သူတို့က Risk Taker တွေပါ။ စည်းတွေ ဘောင်တွေအပြင်က တွေးတောတတ်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်ရဲကြသူတွေပေါ့။
ဒီတော့ “The sky is the limit for creative thinking” လို့ဆိုကြသလိုပဲ။ အလွယ်ပြောရရင် Creative Thinking ဆိုတာ ကျယ်ပြန့်တယ်။ စည်းတွေဘောင်တွေမရှိဘူး။ ကိုယ့်စိတ်စေရာ သွားနိုင်ပြီး နယ်ချဲ့နိုင်တယ်။ လွတ်လပ်တယ်။ ဆန်းသစ်တယ်ပေါ့။
ဆိုတော့ Critical Thinking နဲ့ Creative Thinking ကို ယေဘုယျအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြောရရင်
Critical Thinking ဆိုတာက ရှိနေပြီးသား အရာတစ်ခုခုကနေမှ Validity ကို ပြန်ရှာတယ်
Creative Thinking ကတော့ အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးတယ်
Critical Thinking က Analytic ဖြစ်ပေမယ့် Creative Thinking က Generative ဖြစ်တယ်
Critical Thinking တိုင်းလိုလိုက Convergent သဘောဆောင်တဲ့အတွက် တူညီနိုင်ပြီး
Creative Thinking တိုင်းက Divergent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွဲလွဲနိုင်တယ်
Critical Thinking က Probability ဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာတွေပေါ် မူတည် တတ်ပေမယ့်
Creative Thinking က Possibility ဆိုတဲ့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ့် အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်တတ်ပါတယ်
Critical Thinking က သတ်မှတ်လက်ခံထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပေါ် ချိန်ဆပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပေမယ့်
Creative Thinking ကတော့ ဒီလို ဥပဒေသ တွေဆိုတာတွေက လွတ်လပ်စွာ ကွဲထွက်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ချည်းသက်သက်ပါပဲ
များသောအားဖြင့် Critical Thinking အားသန်သူတွေက Pattern Users တွေ ဖြစ်ကြပြီး
Creative Thinking သမားတွေက Pattern Seekers တွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
The world as we have created it isaprocess of our thinking”
ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ပဲ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီး နေထိုင် အသက်ရှင်နေကြတာပါ။
နေ့စဉ် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘဝတွေထဲမှာ Critical Thinking နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Creative Thinking နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်လျော်ဆုံး အဖြေမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်အသုံးပြုရင်း အခက်အခဲတိုင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ။ အားလုံးပဲ မှန်ကန် ကောင်းမွန် ဆန်းသစ်သော တွေးခေါ်မှုများကို အခြေအနေအလိုက် ပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေ။